ငွေအများကြီးကို အလွယ်တကူချေးပေးလိုက်ပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ကြတော့ကြောင်းကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ငွေအများကြီးကို အလွယ်တကူချေးပေးလိုက်ပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ကြတော့ကြောင်းကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
ငွေအများကြီးကို အလွယ်တကူချေးပေးလိုက်ပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ကြတော့ကြောင်းကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သိင်္ဂီထွန်းကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မက်မက်လုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သိင်္ဂီထွန်းရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကလည်း ဆယ်စုနှစ်မကရှိနေပြီဖြစ်လို့ အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်အများအပြားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။သိင်္ဂီထွန်းက လက်ရှိအချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီး တစ်ယောက်တည်းအေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
သိင်္ဂီထွန်းက သူမကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ ငွေးကြေးဥစ္စာတွေကိုလည်း စည်းစနစ်တကျစုဆောင်းတတ်ပါတယ်နော်။လူတိုင်းအပေါ်မှာ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝစွာကူညီပေးတတ်တဲ့ သိင်္ဂီထွန်းကတော့ သူမကိုအကူအညီလာတောင်းလို့ ငွေးကြေးများစွာကို ချေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။‌စေတနာဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ ပိုက်ဆံချေးပေးလိုက်ပေမယ့် အဲ့ဒီလူတွေက အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့တာကြောင့် သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ဟလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
သိင်္ဂီထွန်းကတော့”2020မှတ်တမ်း. ကျွန်မ အလိုမကျ ပူနေရတဲ့အကြောင်း. ရက်ပိုင်းလပိုင်းလေးပါပဲ အခက်ခဲရှိလို့ ပြောလွန်းလို့ အကူညီတောင်းလွန်းလို့ များစွာသောငွေများကို အလွယ်တကူယူသွားကြတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိလူကြီးမင်းများကို အဆက်သွယ်လည်းမရ ဖုန်းခေါ်လည်းမကိုင်. စာပို့လည်းမပြန်နဲ့..ကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်ကိုဗစ်နဲ့အတူ လွှင့်ပါသွားကြပြီလားလို့ စိတ်ပူနေပါတယ်ဂုဏ်ကြီးရှင်တို့ရှင်.ကူညီရမယ်ဆို ပိုင်ဆိုင်မူရှိသမျှစွန့်ကူညီတတ်တဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ ကျွန်မကိုအဖက်လုပ်ကြပါဦး ဂုဏ်ကြီးရှင်တို့..”ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
Source&Photo Credit: Theingi Tun’s Facebook Account
ရုပျရှငျမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ သိငျ်ဂီထှနျးကတော့ တဈခတျေတဈခါကတညျးက အနုပညာအလုပျတှကေို တစိုကျမကျမကျလုပျဆောငျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သိငျ်ဂီထှနျးရဲ့ အနုပညာသကျတမျးကလညျး ဆယျစုနှဈမကရှိနပွေီဖွဈလို့ အားပေးခစြျခငျကွတဲ့ပရိသတျအမြားအပွားကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျနောျ။သိငျ်ဂီထှနျးက လကျရှိအခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျဆောငျနပွေီး တဈယောကျတညျးအေးအေးခမြျးခမြျး နထေိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
သိငျ်ဂီထှနျးက သူမကိုယျတိုငျကွိုးစားရှာဖှထေားတဲ့ ငှေးကွေးဥစ်စာတှကေိုလညျး စညျးစနဈတကစြုဆောငျးတတျပါတယျနောျ။လူတိုငျးအပေါျမှာ စိတျသဘောထားပွည့ျဝစှာကူညီပေးတတျတဲ့ သိငျ်ဂီထှနျးကတော့ သူမကိုအကူအညီလာတောငျးလို့ ငှေးကွေးမြားစှာကို ခြေးထားတာဖွဈပါတယျ။‌စတေနာဖွူဖွူစငျစငျနဲ့ ပိုကျဆံခြေးပေးလိုကျပမေယ့ျ အဲ့ဒီလူတှကေ အဆကျအသှယျမလုပျတော့တာကွောင့ျ သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကြျနှာပေါျမှာ အောကျပါအတိုငျးဖှင့ျဟလာတာဖွဈပါတယျနောျ။
သိငျ်ဂီထှနျးကတော့”2020မှတျတမျး. ကြှနျမ အလိုမကြ ပူနရေတဲ့အကွောငျး. ရကျပိုငျးလပိုငျးလေးပါပဲ အခကျခဲရှိလို့ ပွောလှနျးလို့ အကူညီတောငျးလှနျးလို့ မြားစှာသောငှမြေားကို အလှယျတကူယူသှားကွတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာရှိလူကွီးမငျးမြားကို အဆကျသှယျလညျးမရ ဖုနျးခေါျလညျးမကိုငျ. စာပို့လညျးမပွနျနဲ့..ကိုဗဈကာလတဈလြှောကျကိုဗဈနဲ့အတူ လှှင့ျပါသှားကွပွီလားလို့ စိတျပူနပေါတယျဂုဏျကွီးရှငျတို့ရှငျ.ကူညီရမယျဆို ပိုငျဆိုငျမူရှိသမြှစှန့ျကူညီတတျတဲ့ သဘောကောငျးတဲ့ ကြှနျမကိုအဖကျလုပျကွပါဦး ဂုဏျကွီးရှငျတို့..”ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝလောတာဖွဈပါတယျနောျ။
Previous post စာ တစ်နာရီ ဖတ်ရင် ငွေ(၁၀၀၀) ပေးတဲ့အပြင် ကော်ဖီ နဲ့ မုန့်ပါ ကျွေးတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က နေရာ တစ်နေရာ..
Next post ကာကွယ်ဆေးအတွက် သတင်းကောင်း အမေစုပြောပြီ